Gossip – An Online Entertainment News Portal
March 20, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली फिल्मका फिल्मीकर्मीले सिनेमाको प्रचारका लागि कुनै पनि समय छाड्दैनन् । कुनै चाडपर्वमा उनीहरु कतै पुग्नुपर्यो भने, त्यसमा के फाइदा छ भनेर हेर्छन् र पुग्छन् । झन्, होली पर्व त कलाकारका लागि सबैभन्दा […]
हिन्दीमा दर्शक बढे, नेपालीमा घटे
March 19, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कात्तिक आर्यन र कृती सेनन नेपाली बजारमा खासै सुनिएको नाम होइन । तर, यी दुइले अभिनय गरेको सिनेमा लुका छुप्पीले नेपाली बजारमा पनि निकै राम्रो कमाइ गर्यो । अभिनेता अनमोल केसीको मुख्य भूमिका […]
March 18, 2019 Tulasa Karki 0
के स्टार जोडी कलाकार बन्दा फाइदा हुन्छ ?
March 12, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरीलाई प्रेमगीत २ खेलेर फाइदा भयो कि भएन होला ? किनकी, यो सिनेमामा उनले स्टार अभिनेता प्रदिप खड्कासँग काम गरेकी थिइन् । तर, यो सिनेमा हिट भयो, प्रदिप पनि महंगो भए । […]
February 26, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- फाल्गुनको १७ गतेबाट रिलिज हुन लागेको सिनेमा ब्रेकअपको टिम अहिले पब्लिसिटीमा दौडिरहेको छ । यो सिनेमाले यूवापूस्तामा हुने प्रेम, विछोड, मस्तीलाई उठान गरेको छ । सिनेमालाई हेमराज वीसीले निर्देशन गरेका हुन् । अभिनेता […]